emva Moon kunye nomhlaba lo mfanekiso | Apg29
emva Moon kunye nomhlaba lo mfanekiso
Isathelayithi Chinese Longjiang-2 ukufota inyanga emva uze ume kumfanekiso efanayo.
Umfanekiso yenyanga kunye nomhlaba lo mfanekiso 4 Februwari 2019. Le Isathelayithi Chinese Longjiang-2 aye wasixhasa inyanga ukufota umhlaba ebonakala ukuba ibe ncinane kakhulu kwikona esezantsi ekunene.
Lawela kwicala kude kwenyanga
nyanga iphelileyo ziwela China kunye isithuthi yaqonda kwi ezinqabileyo kwicala emva kwenyanga ukuba uyabonakala evela Earth. Ngoku, enye ifoto entsha esuka yisathelayithi Chinese ithumba ukujonga Iwakho zombini yonke imizimba yasezulwini ngeenxa kubonwa emva kwenyanga.
Ingaba akukho nto ibangel 'umdla! In wendalo wadalwa nguThixo, kukho iplanethi blue apho thina abantu baphile.
UThixo ubona thina bantu bakho kweli hlabathi. Wayithanda ngamnye kuthi kakhulu ke wathumela uJesu ukuba afele izono zethu engalunganga. Xa sifumana sifumana uYesu uba vinfrälsta kwaye basindiswe,
Nomfanekiso Longjiang-2 kwaba-16 kuphela kilobytes ngobukhulu kodwa wathabatha imizuzu phantse-20 ukuya download. Umfanekiso original ezibomvu kodwa umbala elungisiwe ukuze imibala eyiyo ngakumbi.
Lo mfanekiso ngasentla sathathwa kwikhamera ababekhwele kweso Chinese DSLWP B / Longjiang-2 satellite. Kusenokuba umfanekiso yokuqala inyanga emva kunye nomhlaba ukuba sele sibonile ukuba ezinye enye iziphekepheke Chinese , Chang 'e 5T1, leyo mfanekiso yathabatha umfanekiso izidumbu ezimbini yasezulwini ngo-2014.
Kuqhwithela inyanga nomhlaba
Kukho nezinye imifanekiso icala kude inyanga kunye kwiplanethi yethu blue uMhlaba.
NgoJulayi 5, 2016 eyindumasi ukufota ukuba uthotho imifanekiso evela sikhala elingazange uzibona usemhlabeni. Ngaphezu uya kubona enye imifanekiso apho umhlaba kokutshintsha ngasemva.